people Nepal » महिलाले किन सम्भोग गर्छन् ? केही आश्चर्यजनक कारणहरु महिलाले किन सम्भोग गर्छन् ? केही आश्चर्यजनक कारणहरु – people Nepal
महिलाले पुरुषसँग सम्भोग किन गर्छन् ? आफ्नो वैवाहिक जिवनलाई शान्त पार्न वा टिकाउन या विनाकारणको टाउकोदुखाइ बाट मुक्ति पाउन। महिलाहरुका लागि सम्भोगको कारणमा रोमान्स तथा आनन्द र इच्छा निकै पछाडि पर्दछन् । धेरैलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ । तर महिलाहरुमा भएको अध्ययनका आधारमा तयार भएको एक पुस्तकले यस्तै भन्छ ।
सर्भेक्षणमा सहभागी मध्ये १० जना महिलाले पुरुषबाट उपहार लिएको, डिनरमा खर्च गरेको वा केही किनिदिएका कारण त्यसको पैँचो तिर्न सम्भोग गरेको बताए । कतिले आफ्नो यौनिक प्रदर्शन सुधार गर्न तथा यौन सीप बढाउन समेत सम्भोग गरेको बताएका छन् । सर्भेक्षणमा सहभागी मध्ये ६० प्रतिशत महिलाले आफुले यस्तो केटासँग पनि सम्भोग गरेको स्विकार गरे जो आफ्नो ब्वायफ्रेड थिएन ।